Dingana 12 hananganana fangatahana ho an'ny masoivohonao vaovao | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 2, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny herinandro lasa dia herinandro nahagaga tamin'ny World Marketing Marketing Tontolo izay niresahako ny lohahevitry ny Influencer Marketing. Raha ny orinasa dia ny ankamaroan'ny orinasa mitady torohevitra momba ny fomba fampiharana amin'ny paikady mahomby, niverina an-trano aho ary nanana fanontaniana tsara avy amin'ny iray tamin'ireo mpanatrika nanontany tena momba ny fomba nananganana fitaomana sy fitakiana ampy hanombohana ny masoivohako manokana.
Tiako ho fantatra ny fomba ahafahako mandeha mahazo mpanjifa (io karama io) hanolorako consulting sy coaching… amin'ny alàlan'ny fanombanana izay ananan'izy ireo ankehitriny, avy eo manolotra paikady, vahaolana, torohevitra ary fomba fanao tsara indrindra. Fantatro fa ny bilaogy, boky, e-boky, webinar ary horonan-tsary dia toerana tsara hanombohana. Taiza no nanombohako ho solo ary ahoana no fomba hitomboako ny orinasako hahafahako manao izany amin'ny fotoana feno?
Ka inona no nataoko nanombohana ny fahafahako misafidy ary ahoana no hataoko amin'ny fomba hafa?
Ny Network-nao - Ny orinasao dia tsy miankina amin'ny isa Klout anao, ny isan'ny mpanaraka anao, na ny laharam-pikarohanao. Farany, ny orinasanao dia hahomby amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ataonao amin'ny fanitarana sy famoronana fifandraisana manokana amin'ny tamba-jotra ara-batana. Tsy midika izany fa tsy maninona ny fiaraha-monina, midika fotsiny izany fa tsy hisy dikany ny fiaraha-monina mandra-pifandraisanao manokana amin'ireo any amin'ny faran'ny fitendry.
Blog Niche - ny rehetra dia niresaka momba ny haino aman-jery an-tserasera tamin'ny fotoana nanombohako ny bilaogiko, saingy tsy nisy niresaka manokana momba ny vahaolana azo hanampiana ireo mpivarotra. Tena tiako izany… rehefa niasa tao amin'ny rindrambaiko ho toy ny indostrian'ny serivisy sy mikaroka momba ny Internet ny zavatra manaraka, tonga lehilahy goto ho an'ny tamba-jotra aho. Tsy nisy bilaogy hafa tany ka natomboko ny ahy. Raha afaka manao azy indray aho, dia hihamafy kokoa aza ny lohahevitako, ny jeografia, na ny ifantohan'ny indostria.
The Community - Nitsidika, naneho hevitra, nandroso, nizara ary nanome valin-teny ho an'ireo mpitarika hafa ao amin'ny fiarahamonina aho. Indraindray dia tsy maintsy niady hevitra tamin'izy ireo koa aho, fa ny nifantoka foana dia ny hanome lanja ny fisian'izy ireo raha mampahafantatra ny anarako any. Ny fomba tsara anaovana izany ankehitriny dia manomboka podcast ary manadihady ireo mpitarika ao amin'ny indostria tianao hiaraha-miasa na aminao.
Miteny - Tsy ampy ny haino aman-jery nomerika (misento!) Ka mila manindry ny nofo ianao. Nirotsaka an-tsitrapo aho hiteny na aiza na aiza eto an-toerana sy amin'ny firenena. Nanohy nanatsara ny fahaizako miteny aho, ny fahaizako manoratra (azonao atao ny miady hevitra amin'izany) sy ny fahaizako miresaka. Rehefa miteny amin'ny hetsika iray aho dia mahazo mitarika tonony betsaka kokoa noho ny bilaogy fotsiny. Na izany aza, mila manohy mitoraka bilaogy aho mba hahitako ny fotoana hitenenana amin'izay tsy iray na iray hafa. Ary isaky ny miteny aho dia nihatsara kely noho ny tamin'ny fotoana farany. Mitenena hatraiza hatraiza sy amin'ny olona rehetra!
lasibatra - Misy orinasa mpivady am-polony izay tiako hiaraha-miasa ary fantatro hoe iza izy ireo, iza no mila hihaona amiko, ary mamolavola drafitra momba ny fomba hihaonako amin'izy ireo. Indraindray dia amin'ny alàlan'ny mpiara-miasa iray misy fifandraisana ao amin'ny LinkedIn, indraindray dia mangataka mivantana amin'izy ireo aho hisotro kafe, ary amin'ny fotoana hafa dia mangataka aho ny hanao dinidinika azy ireo amin'ny podcast na manasa azy ireo hanoratra amin'ny mpihaino anay. Tsy hiantso an'io fivarotana io aho (angamba mivezivezy), saingy miaraka amin'izy ireo ny fijerena raha toa ka mety amin'ny fikambanan'izy ireo ary ny mifamadika amin'izany.
manampy - Na taiza na taiza azoko natao, dia nanampy olona tsy nanantena hahazo karama aho. Nampiroborobo azy ireo aho, nitahiry ny atiny ary nizara azy io, nanome valiny ary nanome maimaimpoana ny zava-drehetra. Tokony hotadidinao fa na dia mahatratra 100,000 aza ny mpitsidika, mpihaino, mpijery, mpanaloka, mpanaraka, mpankafy, sns ... iray volana ... tsy misy afa-tsy 30 monja ny mpanjifa mandoa vola. Midika izany fa tsy maintsy manangana laza ianao, manadihady tranga ary mitondra valiny amin'ny sasany hahazoana asa. Nanangana laza manodidina ny varotra anatiny izahay, paikady azo refesina, SEO sarotra ho an'ny mpanonta lehibe, ary fahefana ao anaty… Fa ny sasany dia natomboka tamin'ny fanampiana ny olona hanamboatra zavatra moana ao amin'ny tranonkalany ihany.
Ny fametrahana - Ny milaza ny zavatra tsara rehetra aminao dia tsy mandeha amin'ny laoniny rehefa mivarotra ianao. Fa ny manontany ny olona rehetra aiza no ilany fanampiana dia fomba tsara lavitra kokoa. Raha ara-bakiteny, minitra vitsy lasa izay dia nanatona orinasa iray izay nanampianay izay ny fifamoivoizana ara-organika dia 10 heny noho ny tamin'ny 4 taona lasa izay ary nangataka ny hihaona amin'izy ireo mba hahitana hoe aiza no ahafahanay manampy. Ny fametrahana miasa. Ny fandrenesana izay iadian'ny vinavinan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa ary avy eo ny fahitana raha afaka miasa amin'ny vahaolana sasantsasany ho azy ireo ianao no fomba mety indrindra hidirana amin'ny orinasa iray. Manomboha kely, manaporofo tena, ary avy eo miroso lalindalina kokoa.
Fampiroboroboana tena - Mampihomehy… fa ilaina. Raha miarahaba anao ianao, mizara, manaraka, milaza na zavatra hafa tsy fantatrao - izany dia fanamarinana lehibe ho an'ny fahaizanao. Tsy mibebaka tanteraka aho amin'ny fampiroboroboana izay lazain'ny hafa momba ahy. Tsy mangataka am-pahavitrihana ny olon-drehetra aho mba hanao izany, fa raha misy ny fotoana manararaotra ahy ary misy olona manome ahy dera, azoko atao ny mangataka azy ireo hametraka izany amin'ny Internet.
Jereo Professional - Sehatra sahaza, adiresy mailaka ao amin'ny fonenanao (fa tsy @gmail), adiresin'ny birao, sary matihanina, sary famantarana maoderina, tranokala tsara tarehy, karatra fandraharahana tsy mitovy… ireo rehetra ireo dia tsy fandaniam-bola fotsiny. Izy rehetra dia fandaniana amin'ny marketing ary mariky ny fahatokisana. Raha mahita adiresy mailaka aho dia tsy azoko antoka fa matotra ianao. Raha tsy mahita adiresy sy nomeraon-telefaona aho dia tsy haiko raha hanao raharaham-barotra amin'ny herinandro ianao. Ny fahazoana karama dia momba ny fifampitokisana ary ny fandaniana rehetra izay jerena ivelany dia singa iray fitokisana.
Manorata Boky - Na dia ny varotra azonao fotsiny aza dia ianao sy ny reninao, ny fanoratana boky dia mampiseho fa na inona na inona ny indostria misy anao, dia efa nodinihinao tsara izany ary naorinao ny paikadinao manokana hiasa ao. Talohan'ny naha-mpanoratra ahy dia tsy afaka naka ny fotoan'ny andro tamin'ny kaonferansa na mpanjifa sasany aho. Taorian'ny naha mpanoratra ahy dia nisy olona nanolo-tena handoa ahy hiresaka amin'izy ireo. Toa hadalana izany, saingy singa iray hafa matotra amin'ny indostria misy anao izany.
Hanomboka ny orinasa - Tsy misy vola ampy ary tsy misy fotoana tsara kokoa hanombohana orinasa noho ny amin'izao fotoana izao. Izay rehetra mieritreritra momba azy dia mieritreritra fa mila an'io, mila an'izany, miandry zavatra iray hafa fotsiny, sns mandra-pivoakanao irery ary mahatsapa izany fahatsapana mahatsiravina izany ao an-davon'ny vavoninao izay mahatonga anao ho noana mihaza - hijanona eo amin'izay misy anao ihany ianao. Nanomboka nianatra tany amin'ny oniversite ny zanako lahy ary maty aho rehefa nanomboka DK New Media. Nandritra ny herinandro maro dia natory teo amin'ny latabatra nataoko aho nanao asa hafahafa mba hivelomana ho an'ny olona… ary nianatra nanomana tsara kokoa aho, nivarotra tsara kokoa, nivarotra tsaratsara kokoa, nifidy tsara kokoa ary nanangana ny orinasako tamin'ny farany. Ny fanaintainana dia antony manosika lehibe hanova.
sarobidy - Aza mifantoka amin'izay andoavanao vola na vola be azonao, mifantoka amin'ny lanja entinao ho an'ny hafa. Izaho dia mijery ny olona sasany manombatombana mifototra amin'ny ora niasana ary tapaka. Mijery ny hafa mandoa vola aho ka manangona vola ary mitady mpanjifa vaovao foana. Tsy lavorary izy io, fa mifantoka amin'ny sanda entinay ny mpanjifanay ary avy eo mametraka teti-bola mety sady mendrika azy ireo. Indraindray dia midika izany fa manao fanovana kely isika izay miteraka karama be, amin'ny fotoana hafa dia midika izany fa miasa ny rambony isika mba hamahana ireo hadisoantsika tsy misy vola malemy. Fa rehefa tsapan'ny mpanjifa ny sanda entinao dia tsy mieritreritra ny vola laninao izy ireo.
Tsy misy na iray aza amin'ireo, milaza ny fahombiazanao. Efa an-taonany maro izahay ary nandia taona nahatsiravina - saingy nankafiziko ny tsirairay tamin'izy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana dia namolavola ny karazana mpanjifa izahay izay miara-miasa tsara aminay sy ny olon-kafa izay tsy maintsy tondroinay. Hanao hadisoana lehibe ianao - mianatra fotsiny mandroso.
DK New Media dia masoivohom-baovao vaovao izay mifantoka amin'ny varotra miditra malaky miaraka amin'ny ekipa manam-pahaizana momba ny varotra sy ny teknolojia. Miaraka amin'ny ekipan'izy ireo manam-pahaizana amin'ny fantsona omni amin'ny sehatra dizitaly rehetra, DK New Media manana tanjona ny handefa sy hanavao ny fisian'ny mpanjifa an-tserasera hampitombo ny fizarana tsena, hitondra ny fitarihana ary hanatsara ny resadresaka an-tserasera. DK dia nampitombo ny fizarana tsena ho an'ny mpanjifa rehetra niara-niasa taminy ary tena mahay amin'ny orinasa teknolojia marketing satria manana mpihaino marobe amin'ity boky ity izy ireo. DK New Media manana ny foiben-toerany any afovoan'i Indianapolis.
Tags: about dk new mediafahafahana misafidymanontanyfitorahana bilaogyfiaraha-moninaDK New Mediadouglas karrmanampyny fomba hanombohana masoivohoNetworktambajotrafisondrotanatena fisondrotanaMitenymanomboka agencesarobidy
Ho anao Marketing fotsiny
Apr 2, 2015 amin'ny 9: 57 AM
Misaotra betsaka anao nanokana fotoana hanoratana ity lahatsoratra ity. Izany indrindra no tokony henoin'ny tompona orinasa tsirairay, na dia manomboka sy efa niasa nandritra ny taona maro aza izy ireo. Samy manana tolona avokoa isika rehetra ary mila torohevitra momba ny fanatanterahana ny tanjontsika. Tena nankafiziko ny fahitanao ny marina sy ny nitorianao ny fijoroanao ho vavolombelona. Hizara ity lahatsoratra ity aho ary hataon'ny mpamakinao izany.
Apr 2, 2015 ao amin'ny 5: PM PM
Apr 2, 2015 ao amin'ny 4: PM PM
Hanampy iray aho. Meteza ho mpinamana be. Izany no nataonao. Misaotra amin'ny maha-mpinamana sy miarahaba anao amin'ny taona iray hafa!
Misaotra betsaka, Tim! Niakatra ny ranomasina, eh?
Apr 14, 2015 amin'ny 6: 29 AM
Salama doug, misaotra an'ity lahatsoratra mazava sy mazava ity, manomboka ny masoivohon'ny varotra nomerika any Togo aho ary bara volamena ny torohevitra omenao